Ukubeletha Ukubamba iqhaza
Ukubeletha yi-sakramente langempela, unikeza owesifazane imizuzu eminingi eyigugu. Kodwa ngezinye izikhathi izinkinga ezinzima ziphakama nale nqubo, kodwa, noma kunjalo, ingaxazululwa kalula kalula ngosizo lwezinto ezilungiselelwe zanamuhla - amapayipi wezinsipho. Lezi yimikhiqizo ekhethekile eyenziwe nge-silicone noma i-latex, eyenzelwe ukusiza umama onesihlengikazi, efuna ukulondoloza lactation.
Kunini lapho kufanelekile ukuthenga amaphethi anjalo?
Abesifazane abaningi baphazamise ngokuthula izesekeli ezengeziwe zokuncelisa - izimpompo zebele kanye namapulisi amakhethi wezinsipho. Kodwa-ke, kwezinye izimo kufanelekile ukuyisebenzisa, ukuze ungadlulisela umntwana emndenini wokufakelwa:
Umama unesimo se- ingono esingalungile. Kungaba enkulu kakhulu, igcwele, noma ihoxiswe. I-lining of the nipple kusiza ukugcina lactation. Kuzodingeka uligqoke amasonto ambalwa. Khona-ke, ngenkathi usondeza ubisi lwezingane ebelethweni, ama-patches wezinsipho eziphambene noma ezidwetshiwe uyobahlinzeka ngesimo esifanele, futhi maduzane uzokwazi ukuyeka ukusebenzisa izivumelwano zokufakelwa.
Une-lactation kuphela. Amamemia angenalwazi ngokuvamile asebenzisa ingane ngendlela engalungile esifubeni, ngakho ngenxa yokuthunjwa okungalungile, "uyayichitha". Lokhu kuholela ekubukeni kwemifantu, okwenza owesifazane abe mnandi kakhulu lapho edla. Icala libuhlungu futhi iqiniso lokuthi ingane esanda kuzalwa cishe ayifuni isifuba isikhathi esiningi sosuku, okuyinto eqinisa izinzwa ezibuhlungu. Ngama-cracks, i-nipple pads ingaletha ukukhululeka okukhulu kumama.
Uma ngesizathu esithile udinga ukondla umntwana ebhodleleni ngotshisi obonisiwe isikhathi esithile. Isakhiwo se-ingono ebhodleleni siyaphambana nesakhiwo sezinyosi zikamama, ngakho umntwana uqala ukungenangqondo futhi anikeze isifuba, ekhetha ukufaka esikhundleni sakhe. Phela, kulula kakhulu ukukhipha ubisi ngaphandle kwebhodlela. Kulesi simo, kuzodingeka ucabange ukuthi ungakhetha kanjani amaphuphu e-nipple ukuze afane nesifuba somama ngangokunokwenzeka.
Ingane yazalwa ngokulimala okubi kakhulu, okuhlobene nokulimala okukhulu kwe-CNS. Kulesi simo, ukuthuthukiswa kwengane akufani nesikhathi sakhe, angakwazi ukuphuza kancane noma ngokungalungile. Ukugcoba kuyomsiza ukuba afunde ikhono elisha, edlala indima ye-simulator.
I-Teething iqalile ukwenza okuthile. I-crumb ijwayele ukuqeqesha ukusebenzisa amazinyo asanda kubonakala, ikhala isifuba sikamama. Indima yesikhumba kulokhu iyancipha ibe umsebenzi wokuzivikela.
Ungasebenzisa kanjani ukuguqa?
Izinhlobo ezivame kakhulu zokugqoka kukhona:
I-Latex. Basheshe bahluleka, bathole iphunga futhi bathambile kakhulu. Ngakho-ke, omama abangasaqondi ukuthi bangasebenzisa kanjani imiphongipi ye-ingono ngeke bawagqoke ngendlela efanele.
Abicah. Lokhu kuyindlela engcono kakhulu: ayigqoke ukugqoka futhi ngokuphelele hypoallergenic. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo enjalo imincane kakhulu, eyasiza ukuvuselela ingono futhi yande inani lobisi olukhiqizwayo.
Kubalulekile futhi kulungile ukukhetha usayizi wendwangu yesifuba esithile. Abakhiqizi bakhiqiza lezo zimpahla ngamasayizi amathathu:
S - ngezinsipho ezinezinhlangothi ezingaphansi kwe-1 cm;
M - ngezinsipho zobukhulu obuphakathi nobubanzi obuba ngu-1 cm;
L - ngamabele amakhulu, lapho ububanzi be-ingono budlula u-1 cm.
Ababonisi bokuncelisa beluleka ukuthenga imikhiqizo yabakhiqizi abadumile, njengeMedela, iNyuk, Avent.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi ungabeka kanjani amaphuzu ezinsikeni. Udinga ukwenza lokhu kanje:
Faka inzalo ye-patch ngaphambi kokusetshenziswa kokuqala bese uyihambisa ngenhla ukuze ukhululeke ngokwengeziwe.
Zama ukwandisa ingono, susa ubhedu bese unamathisela ingono, uyifake ngendlela ehambelana nengono.
Kule nkinga ejwayele ukugqoka, ingaswakanyiswa ubisi lomama.
Beka ukugxila kokunqunywe phezulu lapho umuthi wengane uzoba khona.
Umlomo wengane kufanele uvuleke kabanzi futhi, njengoba kunjalo ngaphandle kwekhasi, limboze yonke ingono.
Indlela yokuthuthukisa uketshezi lwesibisi sebele?
Kungenzeka yini ukuphuza i-beet ngesikhathi sokuncelisa?
Kungani isifuba sanyamalala?
Isifuba esibi nge-HS
Uhlobo luni lwamantongomane aluthola ukubeletha?
Ingabe inyanga ingaqala ngokuncelisa?
Ungasusa kanjani ubisi lwebele?
Kungenzeka yini amagilebhisi ngesikhathi sokuncelisa ingane esanda kuzalwa?
Ukwelashwa kwe-sinusitis ku-lactation
Indlela yokubuyiselwa i-lactation?
Ukwelashwa kwama-hemorrhoids ekunceliseni ingane
I-manicure enezinhlobo ezihlukahlukene ze-varnishes
Izindwangu ezijatshelwe abesifazane - imodeli enhle kunazo zonke nezesitayela
Ungayenza kanjani imvula yamaphepha?
Ungabopha kanjani umnsalo ngesipho?
I-Cancer ne-Sagittarius - ukuhambelana ebuhlotsheni bothando
Dyufaston uma usongelwa ukukhulelwa kwesisu
Ithimba lezemidlalo yezingane
I-wallpaper ye-Violet engaphakathi
Yini abantu abayilalela kuqala?
Kungani abesifazane abakhulelwe bengadli ubhanana?
Indlela yokupompa utamatisi kusuka ku-phytophthora?
Iphutha, i-sweater, i-pullover - umehluko
Bifilife - okuhle nokubi
Ukugqoka isikhathi eside phansi ngemikhono
Ukulungiswa kwezigaba eziyisihlanu
Amatholezi wesifazane ama-fashion 2016
I-Alimony ngaphandle kwehlukaniso
I-Niki Minage ihlambalaza abakhubazekile